Muhaajiriinta aan Sharciga Lahayni ma ku Guursan Karaan Minnesota | LawHelp Minnesota
Muhaajiriinta aan Sharciga Lahayni ma ku Guursan Karaan Minnesota
Can Undocumented Immigrants Marry in Minnesota? (PDF)231.73 KB
Kuma lehi wadanka Sharci, ma ku guursan karaa qof Minnesota?
Cid walba oo joogta wadanka United States waxay leeyahay xaq ah inay guuran karto. Taasi waa run sharcigaaga wadanku waxa uu rabo ha noqdee. Laakiin, ku guursiga wadanka US ama guursiga qof muwaadin Mareykan ah (US) ah KAAMA ilaalinayso adiga masaafurin.
Ka wadan hadii aanan haysan lambarka sooshal sakuuratiga?
Gobolka Minnesota codsiyada warqada nikaaxa waxa ay leedahay meel lagu buuxiyo lambarka sooshal sakuuratiga. Hadii aadan haysan lambarka sooshal sakuuratiga, wali aad codsan kartaa laakiin waa inaad ku dhaarataa inaadan haysan mid. Waxaa jira meel lagu sameeyo arrinan oo ka mid ah foomka codsiga.
Maxaa ka dhiga guur mid sharci ah?
Si aad si sharci ah ugu guursato Minnesota waxa inaad codsataa warqada nikaaxa uuna meherka sameeyo qof loo ogol yahay inuu sameyn karo. Kolka waxyaabahaa la sameeyo waxa aad heli warqada nikaaxa.
Ma heli warqad nikaax?
Gobolka Minnesota, waa khasab inaad jiro 18 sanno aadna awoodo inaad naftaada go’aaan u gaari karto hadii aad doonayso inaad guursato. Hadi aad jirto 16 ama 17 sanno, waa aad guursan kartaa hadii uu kuu ogolaado guurka waalidkaa ama qofka waliga kaa ahi. Waa inaad bixisaa magaca iyo ciwaanka waalidkaa kolka aad codsanayso warqada nikaaxa.
Guur caynkee ah ayaan laga ogolayn gobolka Minnesota?
Hadii aad doonayso inaad guursato, qofka kale isuma qabi kartaan kolkaa.
Hadii hadda ka hor aad guursatay, waa khasab inaad qofkii hore si sharci ah aad isu furteen. Furiinka sharciga ahi waa kan u hogaansama sharciyada furiinka ee gobolka ama degmada uu furiinku ka dhacay. Gobolka Minnesota, furiinka waa khasab inuu maro nidaam maxkamadeed waxa uuna u baahan yahay in amar maxkamadeed uu saxiixo xaakim lagana xareeyo amarkaa maxkamada ka hor inta furiinku uusan noqon mid sharciyeysan.
Minnesota uma ogolaato qaar ka mid ah dadka ehelka aadka isugu dhawi ahi inay is guursadaan. Ma guursan kartid:
Ilmaha aad adigu dhashay ama soo korsatay.
Ilmaha aad awoowaha ama ayeeyada u tahay ama ilmahaagu ay soo korsadeen.
Ilmaha aad adeerka ama eedada u tahay hadii ay jirto riximnimo
Ilma adeerada koowaad. Ilma adeerada koowaad waa ilmaha eedadaa ama adeerkaa dhalo ee aad riximka tihiin.
Wixii akhbaar ah ee kale ee ku saabsan warqada nikaaxa ama xaflada meherka, fadlan ka eeg warqadayada xogta aruursan ee Guurka Minnesota (Marriage in Minnesota).